Lacagta Ay Liverpool Ka Bixinayso Rekoodh Jabiye Harvey Elliott Oo Ay Maxkamadi Go'aan Ka Gaadhayso. - Gool24.Net
Lacagta Ay Liverpool Ka Bixinayso Rekoodh Jabiye Harvey Elliott Oo Ay Maxkamadi Go’aan Ka Gaadhayso.
Kooxaha Liverpool iyo Fulham ayaa isku khilaafay lacagta magdhowga ah ee ay Reds waajibka ku tahay in ay ka bixiso da’yarka rekoodhka layaabka leh Premier league ku haysta ee Harvey Elliott waxaana arinta soo dhex galaysa maxkamad go’aamin doonta tirada lacagta ay Liverpool bixin doonto.
Kadi markii ay hore Liverpool kooxaha Yurub ugu waa wayn ku garaacday saxiixa Sepp van den Berg, waxay markale awooday in ay gacanta ku dhigto da’yarka rekoodhka taariikhiga ah ku haysta Premier League ee Harvey Elliott kaas oo ay isagana ka hor qaadeen kooxo ay Barcelona iyo Real Madrid ka mid yihiin.
Liverpool ayaa xagaagan u muuqata mid si gaar ah u ugaadhsanaysa da’yarka Yurub ugu fiican ee mustaqbalka ugu wayn ku leh kubbada cagta waxaana taas laga dareemi karaa qaabka uu qorshaha suuqa ee Reds uu ilaa hadda ku socdo.
Harvey Elliott waxa uu haystaa rekoodhka xidigii abid ugu da’da yaraa ee ka soo muuqday horyaalka Premier league waxaana doonayay kooxaha Barcelona, Real Madrid iyo RB Leipzig laakiin waxaa hadda tartankiisa ku guulaysatay Liverpool.
Kooxaha Liverpool iyo Fulham ayaa isku khilaafay lacagta ay waajibka ku tahay in ay Reds magdhow ahaan u bixiso maadaama oo sharcigu dhigayo in kooxda ciyaartoy da’yar ah soo barbaarisaa in ay magdhaw helayso haddii uu kooxdeeda ka baxo.
Laakiin Sky Sports ayaa shaaciyay in markii ay kooxaha Liverpool iyo Fulham isku khilaafeen lacagta magdhawga ah in kiiskan ay go’aan ka gaadhi doonto maxkamad sidii horeba ay marar badan u dhacday.
Kooxaha Burnley iyo Liverpool ayaa hore ugu heshiin kari waayay lacagtii magdhawga ahayd ee Danny Ings waxaana go’aamisay maxkamad iyada oo Reds markale sugi doonta dhegaysiga maxkamada iyo go’aanka ka soo bixi doonta.
Laakiin taasi kuma xidhna dhamaystirka heshiiskan balse Harvey Elliott waxa uu ka sii tirsanaan doonaa kooxdiisa cusub ee Liverpool iyada oo aan xataa maxkamadu kiiskiisa qaadin.
Harvey Elliott ayaa ku biiri doona kooxda kowaad ee Liverpool inkasta oo aanu sharcigu u ogolayn in uu saxiixo heshiis rasmi ah oo xirfadlenimo balse waxa uu qayb ka wada noqon karaa kooxda kowaad iyo da’yarta Reds.
Si kastaba ha ahaatee, rekoodh jabiye Harvey Elliott ayaa kooxda da’yarta Liverpool waqti la soo qaadan doona iyada oo Jurgen Klopp uu fursad ku siin karo kulamada FA Cupka iyo League Cupka waana guul ay Reds ka soo hoysay mid ka mid ah da’yarta England ugu fiican.